🥇 Uhlalutyo lomsebenzi kunye nezicelo
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 473
Ividiyo yohlalutyo lomsebenzi kunye nezicelo
Myalelo wohlalutyo lomsebenzi kunye nezicelo
Uhlalutyo lomsebenzi kunye nezicelo kufuneka lwenziwe ngokuchanekileyo. Ukwenza olu hlobo lomsebenzi wokuvelisa, kufuneka usebenzise imveliso ekumgangatho ophezulu. Inkqubo enjalo iyenziwa kwaye inikezelwa kubathengi yinkqubo yeSoftware ye-USU. Ngoncedo lwesakhiwo, kunokwenzeka ukuba ubandakanyeke kuhlalutyo lobungcali kwaye uzise umsebenzi kwizikhundla ezitsha ngokupheleleyo. Isibheno senziwa ngexesha lokurekhoda, oko kuthetha ukuba ishishini likhawuleza lenyuke intaba. Kukho ithuba lokunyusa kakhulu umthamo wengeniso, ngenxa yokuba inkampani ikhokelela kwintengiso, ngokuthe ngcembe inyusa umsantsa kukhuphiswano oluphambili. Yenza uhlalutyo ngokuchanekileyo ukuze kungabikho zimpazamo zenziwayo ekuphumezeni kwayo, kwaye inkampani iya kuba nakho ukudibanisa indawo yayo kwimarike njengenkokeli engathandabuzekiyo elawula nayiphi na imbangi, ifumana isixa esikhulu sezibonelelo ezibonakalayo koku.
Xa kunikezelwa ngezicelo zohlalutyo lomsebenzi, akukho zimpazamo ziyakwenziwa, ngenxa yokuba inkampani ikwazi ukuqhubela phambili kwimpikiswano yokhuphiswano kwaye ifumane indawo kwezo zikhundla zizisa isixa sengeniso esinomdla kulawulo loshishino. Xa usenza uhlalutyo lomsebenzi kunye nezicelo, isoftware iyanceda, kuba le software yenzelwe ukubonelela ngoncedo oluphezulu. Ubungcali beengcali buqala ukukhula, oko kuthetha ukuba bayakwazi ukwenza imisebenzi engxamisekileyo. Ngenxa yoku, kunokwenzeka ukugcina izibonelelo zemali kunye nokuzisebenzisa ngendlela eyeyona iluncedo kwishishini. Ubunzima bokusebenza nohlalutyo lweefowuni bunokuvavanywa simahla ngokukhuphela ingxelo yedemo. Ukwenza oku, kufuneka uye kwi-portal esemthethweni ye-USU Software system. Kule ndawo kuphela amakhonkco abo anokusetyenziselwa ukukhuphela iimveliso.
Uhlalutyo kufuneka lunikwe ingqalelo efanelekileyo, umsebenzi kufuneka wenziwe ngendlela eyiyo. Le kuphela kwendlela yokuphucula igama leshishini kunye nokuzisa inkampani kwinqanaba elitsha ngokupheleleyo lobugcisa. Imiyalezo ikwafuneka inikwe isixa sokuqwalaselwa esifunekayo. Inkampani ngokwayo iyakwazi ukuzoba imigaqo, ekhokelwa yiyo, kwaye iyaphumelela. Ulwazi oluphambili kuyo yonke iminyango, kunye nokufumaneka kwayo kunika ukhuphiswano olubalulekileyo. Ngombulelo kubukho beengxelo, kunokwenzeka ukuba ukhethe ezo ndlela zokukhetha isenzo esamkelekileyo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba isoftware ngokuzimeleyo iqikelela iimeko zisebenzisa ukusebenza. Kukulungele kwaye kuyasebenza, oko kuthetha ukuba ukufakwa kwale mveliso ye-elektroniki akufuneki kuhoywe. Inkqubo yokusebenza kunye nokuhlahlelwa kwezicelo ezivela kwinkqubo ye-USU yeSoftware iya kuba sisixhobo se-elektroniki esingenakubekwa endaweni. Ngoncedo lwayo, kuya kwenziwa umsebenzi weofisi.
Iingcali zethu zihlala zikulungele ukubonelela ngoncedo olusemgangathweni olupheleleyo olusisiseko kwabo bantu bathenga isoftware ngohlobo lohlelo olunelayisensi. Imveliso yethu ibonelelwa ngokwemigaqo elungileyo, oko kuthetha ukuba uhlalutyo lomsebenzi kunye nezibheno lunokwenziwa ngokufanelekileyo. Isisombululo esintsonkothileyo sinaso ishedyuli, eyinto yobukrelekrele bokuzenzela obunakho ukulungisa ukungalunganga okwenziwe ngabasebenzi. Abaphathi banako ukusebenza ngeseti yeebhloko zolwazi ezifunekayo. Kwangelo xesha, ukukhusela ngokuchasene ne-espionage yemizi-mveliso, ulwazi lwefomathi yangoku lunokuvalwa kufikelelo lweengcali eziqhelekileyo. Oku kulunge kakhulu njengoko iyavuma ukuba inkampani ikhawuleze ifezekise iziphumo ezinomtsalane kukhuphiswano. Ukuxhasa ulwazi kuyazenzekelayo kwaye yenye yeendlela ezinikezelweyo kuhlalutyo lomsebenzi kunye nezicelo. Izikhumbuzo zokundwendwela ezizenzekelayo kwaye zibenze bakwazi ukufumana iziphumo ngokukhawuleza.
Iimfuno zenkqubo yale mveliso zincitshisiwe ukuze isebenze nakweyiphi na ikhompyuter yakho. Kuya kuba nakho ukuthintela ukunqumama kokusebenza kwaye ngaloo ndlela kuqinisekiswe inkampani kwindawo ephambili. Isoftware yohlalutyo lomsebenzi kunye nezicelo ezivela kwi-Software ye-USU iya kukunceda ungaphoswa yinzuzo kwaye ngaloo ndlela unyuse inani lemali yengeniso. Ukuba uzama ukufikelela kwisikhundla esiphambili kwimagazini yeForbes, emva koko faka inkqubo yethu. Iyakuvumela inkampani ukuba iphumelele ngokukhawuleza kwiziphumo ezazingaziwa ngaphambili. Oku kwenzeka ngenxa yokusebenza okuzenzekelayo kwenkqubo yomsebenzi weofisi, kwaye oku kubonakalisa kakuhle kwimpumelelo yeshishini kwixesha elide. Ubunzima bokuhlalutya umsebenzi kunye nezicelo ezivela kwiprojekthi ye-USU Software iya kuba ngumncedisi we-elektroniki ongenakubuyiselwa kwinkampani, ngaphandle kwayo kuya kuba nzima ukuyenza ngaphandle kwayo. Emva kwayo yonke loo nto, uya kuthatha owona msebenzi unzima, kwaye abasebenzi baya kuba nakho ukugxila ekuphunyezweni komsebenzi ofanelekileyo weofisi.
Isisombululo esidityanisiweyo sanamhlanje sokusebenza kunye nohlalutyo lweefowuni ezivela kwinkqubo ye-USU yeSoftware yenza ukuba kube lula ukusebenza nemephu yehlabathi, apho iindawo ezihambelanayo ziphawulwe khona. Oku kulunge kakhulu njengoko kwenza ukuba kwenziwe uhlalutyo olusebenzayo kwinqanaba lejografi. Abathengi, iikontraki, abo bakhuphisana nabo, kunye nakwezinye iindawo ezinokuphawulwa kwimephu. Injini yokukhangela inokufumana naluphi na ulwazi kuba unokuseta iiparameter kunye nemibuzo yokubuza usebenzisa iseti yeefilitha. Isoftware yale mihla yohlalutyo lomsebenzi kunye nezicelo zenziwe ziingcali zenkqubo yeSoftware ye-USU isebenzisa ubunjani obuphezulu kunye nobuchwepheshe obuphambili.
Izisombululo zetekhnoloji zithengwa liqela lesoftware ye-USU kumazwe angaphandle kwaye zilungiselelwe ukwenza isiseko sezicelo zesoftware. Ubukho besiseko esinye senza ukuba kuncitshiswe iindleko, kwaye ke oko kunika ithuba lokunciphisa iindleko zizonke zomthengi, eziluncedo kakhulu kubo. Sisoloko sisebenza nabaphulaphuli ekujoliswe kubo kwaye siqokelela ingxelo kwabo bantu nakwiinkampani ezithenge izicelo zethu zophuhliso. Ngalo lonke ixesha iingcali ze-USU Software ziqhuba uhlalutyo lweenkcukacha-manani eziqokelelweyo kwaye, ukuba kukho imfuneko, zenze utshintsho kwisicelo sohlalutyo ukuze ikwazi ukumelana nemisebenzi eyabelwe yona nangcono. Inkqubo yohlalutyo lomsebenzi iba sisixhobo esikumgangatho ophezulu ngokwenyani esingenakubekwa endaweni yenkampani yomfumani, ngoncedo lwayo nayiphi na imisebenzi yaseofisini esombulula ngokulula nangokufanelekileyo. Iinkcukacha zolwazi eziboniswe kwimephu, kwaye ngaphakathi kwamakhadi abo kubonisa imeko yokwenyani yento ekhethiweyo yolwakhiwo.
Umsebenzi wohlalutyo lwezicelo kwinqanaba lobungcali usebenzisa usetyenziso olusuka kwinkqubo ye-USU Software. Ukuba umsebenzisi ucofa kabini kwikhompyuter yendlela esisixhobo, esalatha kwikhadi lomthengi, unokufumana ulwazi olupheleleyo malunga neakhawunti ekhethiweyo.
Imephu inokukhutshelwa kwaye kubukho uqhagamshelo lwe-Intanethi olubuthathaka, iboniswa ngaphandle kweengxaki, kuba isicelo sokufikelela kwesicelo kwi-hard drive yekhompyuter yakho. Ukuxhomekeka kubutyebi babasebenzi kuncitshisiwe kuba kunokwenzeka ukusasaza ezona zicelo zinzima kwimisebenzi yoxanduva lwesoftware yohlalutyo lomsebenzi kunye nezicelo. Gcwalisa iindawo ezingenanto kwimephu kwaye ukhuphisane nabachasi bakho, ubafumane kwaye udibanise izikhundla zakho njengenkokeli. Vula umboniso wabathengi kunye nezicelo kwimephu yehlabathi usebenzisa izicelo zemveliso zombane. Isoftware yokusebenza kunye nohlahlelo lwezicelo ezivela kwinkqubo ye-USU yeSoftware ivumela ukwahluka kwemibala yezicelo zokuba ngcono ukwahlula imeko yezicelo zabo zangoku. Imeko yentengiso icacile kumthengi, kwaye sikwazi ukwenza ezona zigqibo ziqinisekisiweyo zolawulo, eziqinisekisa ulawulo oluyimpumelelo lwenkampani. Inkqubo yohlalutyo lwezicelo iba yimveliso yokusekwa komfumani ethi izise ishishini kwinqanaba elitsha ngokupheleleyo lobungcali.